एक साधारण minute मिनेट ब्लकचेन र क्रिप्टोकरन्सी बुझ्ने मार्गनिर्देशन क्रिप्टो गेटर | सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोकरन्सी, ब्लकचेन र फोरक्स न्यूज एग्रीगेटर
क्रिप्टो गेटर | सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोकरन्सी, ब्लकचेन र फोरक्स न्यूज एग्रीगेटर
सर्वश्रेष्ठ क्रिप्टोकरन्सी, ब्लकचेन र फोरक्स न्यूज एग्रीगेटर
खोजी गर्नुहोस् ...
क्रिप्टोकरन्सी र फोरेक्स समाचार
संसाधन र गाइडहरू
यो उत्कृष्ट ब्रोकरको साथ एक ट्रेड जस्तै विदेशी मुद्रा ट्रेड
कसरी स्वत: विदेशी मुद्रा व्यापार र एक निष्क्रिय आय बनाउन CTrend FX - स्वचालित विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग संकेत
स्वचालित विदेशी मुद्रा ट्रेडिंग सिग्नल CTrend FX - एक पटक सेट अप गर्नुहोस् र निष्क्रिय आय कमाउनको लागि स्वत: पाइलटमा व्यापार गर्नुहोस्।
क्रिप्टोकरन्सीहरूको बारेमा थप जान्नुहोस्
ट्रेड क्राइप्टोकुरेन्सीहरू प्रो जस्ता
तपाइँको क्रिप्टोकरन्सी सम्पत्तिमा उच्च उपज कमाउनुहोस्
तपाईंको क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडि Auto स्वचालित गर्नुहोस्
तपाइँको क्रिप्टो सुरक्षित राख्दै
वेब होस्टिंग सेवाहरू
कला र शिल्प स्टोर
एक साधारण minute मिनेट ब्लकचेन र क्रिप्टोकरन्सीहरू बुझ्ने मार्गनिर्देशन
क्राइप्टोकरन्सीहरू पैसाको डिजिटल रूप हो, यसले कि उनीहरू साँच्चिकै डिजिटल हुन् भन्ने बुझाउँदछ - कुनै भौतिक सिक्का वा बिल जारी गरिएको छैन। तिनीहरू वस्तुहरू र सेवाहरूका लागि आदानप्रदानको एक माध्यम हुन्। एक पियर-टु-पियर मनी सिस्टमको रूपमा, क्रिप्टो करन्सीहरूलाई व्यक्तिहरू बीच हस्तान्तरण गर्नु अघि बिचौलिएको आवश्यकता पर्दैन।
क्राइप्टो लगानी कत्तिको लाभदायक छ?
छवि स्रोत: SoFi.com
क्राइप्टोकरन्सीहरू पैसाको डिजिटल रूप हो, यसले कि उनीहरू साँच्चिकै डिजिटल हुन् भन्ने बुझाउँदछ - कुनै भौतिक सिक्का वा बिल जारी गरिएको छैन। तिनीहरू वस्तुहरू र सेवाहरूका लागि आदानप्रदानको एक माध्यम हुन्। एक पियर-टु-पियर पैसा प्रणालीको रूपमा, क्रिप्टप्कोरेन्सीहरू व्यक्तिहरू बीच हस्तान्तरण हुन सक्नु अघि उनीहरू मध्यस्थहरूको आवश्यक पर्दैन।
Bitcoin, बजार क्यापिटलाइजेसनद्वारा पहिलो र सबैभन्दा ठूलो क्रिप्टोकरन्सी २०० of वित्तीय संकटको कारण स्थापित भएको थियो। नोबल क्रिप्टो सम्पत्ति अज्ञात व्यक्ति वा छद्म नाम Satoshi Nakamoto अन्तर्गत व्यक्तिको समूह द्वारा सिर्जना गरिएको थियो।
त्यहाँ एक मुठ्ठी क्रिप्टो करन्सीहरू बाहिर छन्, हरेक दिन बढि बनाइन्छ, तथापि बिटकॉइन (BTC), Ethereum (ETH) र Tether USD (USDT) अस्तित्वमा शीर्ष3ठूला क्रिप्टो करन्सीहरू हुन्। लाईमलाइटमा आएदेखि, crypto सम्पत्ति रिटेल र संस्थागत दुवै खेलाडीहरूलाई आकर्षित गर्दै - धेरै चासो लिईरहेको छ।
आज, धेरै व्यापारीहरू र भुक्तानी गेटवेहरूले क्रिप्टो भुक्तानी स्वीकार गर्दछन् - सामान र सेवाहरूको लागि सजिलो र सुविधाजनक भुक्तानको सुविधा प्रदान गर्दै। यद्यपि अधिकांश देशहरूसँग नरम अवतरण छैन क्रिप्टो, blockchain, क्रिप्टोकरन्सीहरूको लागि अन्तर्निहित टेक्नोलोजीले देशहरूमा बढेको अपुरो फेला पारेको छ।
क्राइप्टोकरन्सीहरू क्रिप्टोग्राफिकद्वारा सुरक्षित छन् लेजर प्रविधि भनिन्छ blockchain जसले यसलाई टेम्पर प्रूफ र अपरिवर्तनीय बनाउँछ। बिटकॉइनले डिजिटल पैसासँग सम्बन्धित सबैभन्दा ठूलो समस्या समाधान गर्दछ - डबल खर्चको समस्या। परम्परागत मौद्रिक प्रणालीको विपरित, क्रिप्टो मुद्राहरू कुनै पनि केन्द्रीय निकाय द्वारा जारी हुँदैन, त्यसैले यो केन्द्रीय नियन्त्रण र हेरफेरबाट मुक्त छ।
अन्तत: तिनीहरू सेन्सरशीपको प्रतिरोधी छन् र बन्द गर्न सकिदैन किनभने तिनीहरू अधिकतर विकेन्द्रीकृत छन्।
क्राइप्टोकरन्सीहरू हुन् व्यापार या त केन्द्रिय वा विकेन्द्रीकृत एक्सचेन्जमा। क्रिप्टो एक्सचेन्ज क्रिप्टोकरन्सीहरूको लेनदेनका लागि हाल प्राथमिक योगदानकर्ताहरू छन् जबकि केन्द्रीयकृत एक्सचेन्जहरू एक्सचेन्जहरू मार्फत कारोबार गर्ने क्रिप्टोकरन्सीहरूको कुल खण्डको एक ठूलो प्रतिशतको लागि।
केन्द्रीकृत विनिमय (CEX) नियन्त्रण को एकल बिन्दु संग पारंपरिक शेयर बजार जस्तै संचालन। सबैभन्दा सामान्य रूपमा उपलब्ध र आदानप्रदान गर्न सजिलोको रूपमा, केन्द्रीकृत विनिमय केही विवादास्पद छन् किनकि क्रिप्टो करन्सीहरू कन्भेन्सनद्वारा विकेन्द्रीकृत मानिन्छन्।
केन्द्रीकरणको धारणाले स a्केत गर्दछ कि तेस्रो-पक्ष वा मध्य-व्यक्ति क्रिप्टो मुद्राको लेनदेनको आचरणमा कार्यरत छ। व्यापारी वा प्रयोगकर्ताहरूले उनीहरूको रकम मध्य-म्यानको हेरचाहमा राख्छन् किनकि तिनीहरू दिन प्रतिदिन लेनदेनमा संलग्न हुन्छन्। केन्द्रीकृत एक्सचेन्जमा, अर्डरहरू कार्यान्वयन हुन्छन् अफ-चेन.
विकेन्द्रीकृत विनिमय (DEXs) यसको विपरित तिनीहरूको केन्द्रित समकक्षहरूको प्रत्यक्ष विपरीत हो। DEX मा लेनदेन कार्यान्वयन गरिन्छ अन-चेन (स्मार्ट सम्झौताको साथ), अर्को शब्दमा प्रयोगकर्ताहरू वा ट्रेडरहरूले उनीहरूको कोष मध्यस्थ-व्यक्ति वा तेस्रो-पक्षको हातमा विश्वास गर्दैनन्। प्रत्येक अर्डर (लेनदेन) ब्लकचेनमा प्रकाशित हुन्छ - जुन कि क्रिप्टोकरन्सी ट्रेडिंगको लागि सबैभन्दा पारदर्शी दृष्टिकोण हो।
विकेन्द्रीकृत एक्सचेन्जको एकमात्र दोष यो हो कि यो नवसाथीहरूका लागि अलि जटिल हुन सक्छ जसलाई विनिमय मार्फत नेभिगेट गर्न गाह्रो समय हुन सक्छ। यद्यपि, नयाँ जेनेरेसन DEX जस्तै Uniswap, Sushiwap यस प्रक्रिया को और अधिक सरलीकृत छ।
तिनीहरू अर्डर बुकको अवधारणा बदल्न स्वचालित बजार निर्माताहरू (एएमएम) प्रयोग गर्छन्। एएमएम मोडल अवधारणामा, त्यहाँ छैन निर्माताहरू वा लिनेहरू, केवल प्रयोगकर्ताहरू जसले ट्रेडहरू कार्यान्वयन गर्छन्। पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार, AMM- आधारित DEX हरू अधिक उपयोगकर्ता मैत्री छन्। तिनीहरू सुविधाजनक रूपमा प्रयोग गरिन्छ र प्राय: जस्तै वालेटमा एकीकृत हुन्छन् भरोसा वालेट, मेटामास्क र ImToken.
अधिकतर क्रिप्टोकुरेन्सीहरू जस्तै बिटकोइन खानीमा छ। खानी एक प्रक्रिया हो जसद्वारा नयाँ क्रिप्टोकरन्सी लेनदेनहरू पूर्ण हुन्छन् र नयाँ ब्लकहरू ब्लकचेनमा थप गरियो। खनिकहरूले लेनदेन प्रमाणित गर्न वा ब्लकचेनमा नयाँ ब्लकहरू थप्न प्रोत्साहनहरू प्राप्त गर्दछन्। यो एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया हो, खण्ड खननको सम्भावना धेरै हदसम्म निर्भर गर्दछ हैशिंग पावर खानीको कम्प्युटर को।
Bitcoin नेटवर्क को लागी, ब्लक पुरस्कार वर्तमान 6.25 बिटकोइन हो। प्रत्येक ब्लक खानीको लागि, खानी जो खण्ड जोड्यो उसले .6.25.२XNUMX बिटकोइनहरू प्राप्त गर्नेछ। पुरस्कार भनिन्छ एक प्रमुख घटना मा प्रत्येक चार बर्षमा आधा गर्न जारी Bitcoin Halving। अन्तिम आधा बाँच्ने मे ११, २०२० मा आएको थियो, १२..11 बिटकोइनबाट 2020.२.12.5 बिटकोइनमा इनाम घटाउँदै।
प्राप्त खनन पुरस्कारको साथसाथै, खनिजहरूले प्रयोगकर्ताहरू द्वारा पठाउँदा, कारोबारको क्रिप्टो करन्सीहरूमा तिरेको लेनदेन शुल्कबाट पनि कमाउँछन्। त्यस्ता शुल्कहरू केहि सेन्टदेखि धेरै डलरसम्म हुन सक्दछ।
खनन कम्प्युटरहरूले बाँकी रहेको लेनदेनको पोखरीबाट लेनदेन लिन्छ, त्यसपछि लेनदेन पूरा गर्नको लागि प्रयोगकर्तासँग पर्याप्त रकम छ र दोस्रो जाँच गर्नुहोस् कि लेनदेन अधिकारपूर्वक अधिकृत गरिएको थियो भनेर निश्चित गर्न एक चेक चलाउनुहोस्।
घटनामा यदि त्यस्ता प्रयोगकर्तासँग लेनदेन शुल्कहरू कभर गर्न पर्याप्त रकम छैन, लेनदेन असफल लेनदेनको रूपमा प्रयोगकर्ताहरूमा फिर्ता फिर्ता जान सक्छ। खनिकहरूले ठूलो लेनदेन शुल्कको साथ लेनदेन लिने बढी सम्भावना हुन्छ। यो किन यो सामान्य मानिन्छ 'जति ठूलो शुल्क, लेनदेन कार्यान्वयन छिटो हुन्छ'।
क्राइप्टोकरन्सी प्रयोगकर्ताहरूसँग अनलाइन, अफलाइन वा बीचमा छनौट गर्न विकल्प छ हार्डवेयर वालेटहरू। सबैभन्दा सुरक्षित सुविधाहरूको साथ तपाईं वालेटको लागि बसोबास गर्ने छनौटमा निर्भर गर्दछ। यद्यपि अफलाईन र अनलाइन वालेटहरू सुरक्षित भएको प्रमाणित भएको छ, तर हार्डवेयर वालेटहरू तपाईंको डिजिटल सम्पत्तीहरूको लागि उच्च सुरक्षा प्रदान गर्न परिचित छन्।
अनलाइन वालेटहरू नि: शुल्क, उपयोगकर्ता मैत्री र सजिलैसँग उपलब्ध हुन्छन् र त्यस्तै, तिनीहरू क्रिप्टो उद्योगमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने वालेटहरू हुन्। एकै समयमा, तिनीहरू विभिन्न प्रकारका क्रिप्टो वालेटहरूमा सबैभन्दा कमजोर हुन्छन्। अर्कोको अगाडि हार्डवेयर वालेट, एक अफलाइन वालेट तपाइँको क्रिप्टो सम्पत्ति को लागी तुलनात्मक रूपमा राम्रो सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
यदि तपाईं पहिलो पटक क्रिप्टोकुरेन्सी वालेट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, एक सुरक्षित तर प्रयोगकर्ता मैत्री वालेटमा टाँस्नु नै तपाईंको नम्बर एक लक्ष्य हुनुपर्दछ। उच्च सुरक्षाका लागि हार्डवेयर वालेटहरू जस्तै लेजर नानो एक्स विज्ञहरु द्वारा सिफारिस गरीन्छ।
ब्याक अप गर्दै क्रिप्टो वालेटहरू सेफ-गार्डिंग क्रिप्टो सम्पत्तिमा एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया हो। कसैको वालेटहरू हराउने स्थितिमा, निजी कुञ्जी वा ब्याकअपबाट प्राप्त पासफ्रेजहरू प्रयोग गरेर नयाँ वालेटमा रकम सजिलै पुन: प्राप्त गर्न सकिन्छ।
क्राइप्टोकरन्सीहरू अत्यधिक अस्थिर सम्पत्ति मानिन्छन्, र तीनीहरू ठूला मूल्यको उतार चढावको अधीनमा छन्। सिद्धान्तमा, उच्च जोखिमको लगानीले उच्च पुरस्कार दिन्छ, यो क्रिप्टो मुद्राको पनि हो। एक संभावित नकारात्मक पक्ष को घटना मा, को घाटा विनाशकारी हुन सक्छ। यसैले लगानी सल्लाहकारहरूले प्रचार गर्छन् 'कहिले पनि कुनै पनि समयमा तपाईंलाई कुनै पनि बिन्दुमा गुमाउन नचाहेको पैसा लगानी नगर्नुहोस्।'
उल्टो सम्भाव्यता वस्तुतः अन्तहीन छ, बिटकॉइन २००० मा सेप्टेम्बरको शुरुमा $ १००० को आसपास कारोबार गर्दै थियो र आज १ kk भन्दा माथि कारोबार गर्दैछ। त्यहाँ बाहिर 1000००० भन्दा बढि क्रिप्टो करन्सीहरू छन्, यसको राम्रो विश्लेषण लिनको लागि वा उच्च अपसाइड सम्भावित टोकन लिन धेरै विश्लेषणको आवश्यक पर्दछ। यद्यपि, बैल बजारमा नाफा कमाउने अनमोलताहरू जहिले पनि बढी हुन्छन्, किनभने लोकप्रिय एफोरिज्ममा जान्छ, "बढ्दो ज्वारले सबै डु l्गालाई उचाल्छ"।
प्रकाशित डिसेम्बर 13, 20200By क्रिप्टो गेटर	संसाधन र गाइडहरू पोस्ट संसाधन र गाइडहरू ट्याग गरिएको #Cryptocurrencies, Bitcoin, ब्लक दल, इथेरियम
यो स्थान हो जहाँ Bitcoin (BTC) र Ethereum (ETH), र सामान्यतया blockchain टेक्नोलोजीको बारेमा नवीनतम समाचारहरू प्राप्त गर्न, साथसाथै तपाईंलाई क्रिप्टोकरन्सी र blockchain इकोसिस्टममा नेभिगेट गर्न मद्दतको लागि संसाधनहरू र गाइडहरूको पहुँच छ।
तपाईं पर्छ लग - इन एक टिप्पणी पोस्ट गर्न।
अर्को पोस्ट चिनियाँ बासिन्दाहरूले डिजिटल युआन परीक्षण घटनामा २० के लेनदेन गर्छन्
अघिल्लो पोस्ट 'Bitcoin कहिले पनि ह्याक हुँदैन' - क्रिप्टो खेलाडीहरूले युएस ट्रेजरी भंगलाई जवाफ दिए
यो उत्कृष्ट विनियमित ब्रोकरको साथ पेशेवरको जस्तै व्यापार विदेशी मुद्रा
फिचर गरिएको विज्ञापन
क्रिप्टोकरन्सीहरूको बारेमा जान्नुहोस्
तपाइँको क्रिप्टो सुरक्षित राख्नुहोस्
तपाईंको क्रिप्टो ट्रेडि Auto स्वचालित गर्नुहोस्
विदेशी मुद्रा र क्रिप्टो ट्रेडिंग पदोन्नति प्राप्त गर्न सदस्यता लिनुहोस्!
विदेशी मुद्रा र क्राइप्टो ट्रेडिंग पदोन्नतीहरूको लागि आमन्त्रणहरू प्राप्त गर्न पहिलो बन्नुहोस्! ट्रेडिंग बोनसमा $ २ to० सम्म! *
* प्रचार र बोनस मात्रा फरक हुन सक्छ।
539 अन्य सदस्यहरू सामेल हुनुहोस्
नियम र शर्तें गोपनीयता नीति